Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana 2018: I Voahangy no nanimba an’i Hery Rajaonarimampianina
Fifidianana 2018: I Voahangy no nanimba an’i Hery Rajaonarimampianina
Tonga amin’ny fotoana hitsarana ny mpitondra firenena sy ny mpanao pôlitika isika amin’izao fotoana izao.Tsy ny filoham-pirenena ihany no tsarain’ny vahoaka amin’izany fa hatramin’ny vady aman-janany sy ny olona manodidina azy akaiky, ireo minisitra sy ny mpiray antoko aminy ao anatin’ny fitondrana. Isan’ny voatsaran’ny vahoaka koa ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara).
Milaza miara-mahita isika rahetra fa isan’ny olana lehibe amin’ny fitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao ny mahakasika an-dramatoa Voahangy vadiny.
Iza moa no tsy miresaka ity ramatoa ity ny mpiray tanindrazana ankehitriny noho ny fitsabahany amin’ny raharaham-pirenena be loatra. Nanomboka ny taona 2014 niakaran’ingahy Hery Rjaonarimampianina teo amin’ny fitondrana dia nandeha be ny resaka teto amin’ny firenena fa tsy maintsy misy fahazoan-dàlana amin’i Voahangy Rajaonarimapianina raha toa ka te ho mpikambana ao anatin’ny andrim-panjakana. Isan’izany ny fanendrena minisitra, ka nandeha dia nandeha aza ny resaka tamin’izay fotoana izay fa raha tsy mihaona amin’i Voahangy aloha dia tsy misy hevitra. Toa izany koa ny olona hotendrena ho mpiasam-panjakana ambony dia ireo tale jeneraly sy tale ary sekretera jeneraly hiasa any amin’ny ministera. Raha nahatsiaro ny tantara isika dia nanana kabinetra kely mihitsy ity ramatoa ity tao Iavoloha tao. Ireo dia olona niara-miasa taminy ary manao ny iraka izay ampanaoviny. Teny amin’ny fahitalavitra maro isan-karazany dia miseho amin’ny alalan’ny vadin’ny filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina tanteraka ireny olona ireny. Dia nandeha ny resaka ny olona hoe fa angaha moa ny vadin’ny filoham-pirenena manao asa fitantanana etoMadagasikara koa? Taiza eran-tany ka misy vadin’ny filoha manao izany? Ary vola avy aiza koa no anaovany ireo asa ataony ireo?
Mahakasika ny fanendrena praiminisitra no tena zava-doza tamin’ny tantara teto amin’ny firenena tamin’ity repoblika fahefatra ity. Ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina no voalaza fa tompon’ny lakile amin’izany. Tsy hilaza ny antsipirihany rehetra isika fa efa maro dia maro ny zavatra voalazan’ny gazety amin’iny raharaha iny ny taona 2016. Ny vaovao niavaka tamin’izany dia ny mahakasika ny Praiminisitra Jean Ravelonarivo izay noesorina tamin’ny fomba mamohehitra, tsy ara-dalàna sy tsy manaraka ny soatoavina pôlitika ary ny fahendrena malagasy tanteraka. Voalaza tamin’ireny fotoana ireny fa noho ity praiminisitra ity tsy nety nanaraka ny baiko nampanaovin’i Voahangy Rajaonarimampianina azy sy ny olona miara-miasa aminy no nahatonga ny filoham-pirenena nanala ity olona ity tsy ho lehiben’ny governemanta intsony. Nahazo irony antsoina hoe fanerena ankolaka (chantage) tamin’ny fiainam-pianakaviana ny filoham-pirenena ka iny voatery nanaisotra azy iny ingahy Hery Rajaonarimampianina. Tamin’izany aza dia efa nandeha ny resaka teto amin’ny firenena fa tsy maintsy ingahy Solonandrasana Olivier Mahafaly no hatao praiminisitra hisolo an’ingahy Ravelonarivo Jean satria ity minisitra ny Atitany ity no atokisan’ny vadin’ny filoham-pirenena. Dia io tonga eo amin’ny toerana praiminisitra io ingahy Mahafaly Solonandrasana Olivier. Resabe teto amin’ny firenena avokoa izany. Mandeha be indray ny resaka ankehitriny fa efa tsy mila ity praiminisitra ity koa ramatoa Voahangy amin’izao fotoana izao. Mitsingilahila indray hono ny toeran’ingahy Mahafaly Solonandrasana noho izany. Dia ho hitantsika eo ny tohin’izany na marina na tsia.
Tsy izany ihany fa hatramin’ny raharaha mahakasika fitantanana maro any amin’ny asam-panjakana any dia ahenoana ny anaran’i Voahangy avokoa. Ny avy ao amin’ny manodidina azy moa tsy misy milaza ny fahamarinan’ny filazana momba azy ireo na marina na tsia fa mipetraka fotsiny amin’izao.
Ampahany ihany amin’ny zavatra maro itsaran’ny vahoaka an’ingahy Hery Rajaonarimampianina ireo. Misy mihitsy aza no milaza fa angaha i Voahangy no lany ho filoham-pirenena no izy no mibaiko sy mandidy amin’ny fanapahan-kevitra anendrena olona ambony eto amin’ny firenena? Ny avy ao an-dapa moa dia mihoron-koditra raha vao i Voahangy no tenenina ka izay te hijanona ao amin’ny fanjakana dia tsy maintsy manaiky azy hono.
Tsy faly amin’izany ny vahoaka ary tena tsy faly mihitsy. Noho izany dia tsy maintsy misy fiatraikany amin’ny fifidianana amin’ny 2018 ireny fihetsika nataon’i Voahangy Rajaonarimampianina ireny.
Tonga amin’ny fotoana hijinjana ny nafafy tao anatin’ny efa-taona izao ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina sy ny HVM ankehitriny. Aoka hazava ny resaka fa na iza olona anontanianay mahakasika ity fanjakana ity dia milaza fa tsy hifidy azy intsony. Tsy aty andrenivohitra ihany no ahenoana izany fa hatrany ambanivohitra koa. Tsy izahay mpanao gazety ihany nefa no mahita izany fa hatramin’ny olona rehetra izay mandinika ny raharaham-pirenena. Raha ny tombatomban’ny mpandinika ny vaovao sy ny pôlitika eto Madagasikara dia tsy hahazo ny salanisa 15, 99% azony tamin’ny fifidianana fihodinana voalohany tamin’ny taona 2013 iny ingahy Hery Rajaonarimampianina. Izany dia noho ny antony avy amin’i Voahangy vadiny amin’ny ankapobeny.